Tue, May 26, 2020 at 8:09pm
फेरी घट्यो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक ४ अंकले घटेर १ हजार १ सय ७८ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, ७ भदौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेको भए पनि शेयर बजारलाई त्यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन । बिहिबार शेयर बजार ओरालो लागेर कारोवार बन्द भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक करीब चार अङ्क अर्थात् ३.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार १७८.५० मा झरेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका शेयर कारोवार..
ओरालो यात्रामा शेयर बजार, नेप्से ४ अंकले घटेर १ हजार १ सय ८३ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, ५ भदौ तीन दिनदेखि निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारमा मंगलबार पनि घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ४.१८ बिन्दुले घटेर एक हजार १८३.८९ बिन्दुमा पुगेको हो । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.८३ बिन्दुले घटेर २४९.९२ बिन्दुमा झरेको छ । मंगलबार कूल १६१ कम्पनीको पाँच लाख ७० हजार १७३ कित्ता शेयर रु..
काठमाडौँ, ४ भदौ शेयर बजार सोमबार पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ८ दशमलब २२ बिन्दुले घटेर एक हजार १८८ बिन्दुमा ओर्लेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत १ दशमलब ७८ बिन्दुले २५० दशमलब ७५ बिन्दुमा कायम भएको छ । स्टकका अनुसार सोमबार कूल १६० कम्पनीको छ लाख तीन..
शेयर बजारमा गिरावट, नेप्से १४ अंकले ओरालो लागेर १ हजार १ सय ९६ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, ३ भदौ शेयर बजारमा आइतबार दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १४.०३ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार १९६.२९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत २.८५ बिन्दुले ओरालो लागेर २५२.५३ बिन्दुमा पुगेको छ । आइतबार कूल १६० कम्पनीको १५ लाख ६४ हजार ६९२ कित्ता शेयर रु ३२..
सरकारको नयाँ योजना : सबै नेपालीलाई जलविद्युतको शेयर, अब आर्थिकस्तर उकासिएला ?
शनिबार, भाद्र २, २०७५ साल
काठमाडौँ, २ भदौ सरकारले ‘जनजनमा शेयर घरघरमा बिजुली’को नारालाई रणनीतिक महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सो नारालाई कार्यान्वयनका लागि आर्कषक र प्रतिफल दिने आयोजनाको समेत खोजी गरिरहेको छ । रसुवामा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछि सो जिल्लाका स्थानीयवासीको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठेको तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दिने लक्ष्य राखेको हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा..
शेयर बजारमा सामान्य सुधार, परिसूचक ०.६१ अंकले बढेर १ हजार २ सय १० अंकमा पुग्यो
काठमाडौँ, ३१ साउन शेयर बजारमा बिहिबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बिहिबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ०.६१ बिन्दुले बढेर एक हजार २१० मा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक भने ०.०२ बिन्दुले घटेको छ । कूल १६६ कम्पनीको १३ लाख ६१ हजार ६२७ कित्ता शेयर रु ४५ करोड ५२ लाख ४३ हजार ७८५..
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयर बजार, २८ अंकले उकालो लागेर १ हजार २ सय ९ अंक कायम !
काठमाडौँ, ३० साउन बुधबार सेयर बजारको परिसूचक १२ सय नाघेको छ। २८. ७३ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक १२०९ अंकमा कायम भएको हो। कारोबार रकम समेत यस दिन बढेको छ। कुल १६५ कम्पनीको ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। सेन्सिटिभ परिसूचक ५.९ अंकले बढेको छ। लामो समयसम्म घटिरहेको बजार निकै तल आइसकेपछि खरिदकर्ताको चाप बढेको हो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत..
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयर बजार, नेप्से १० अंकले बढेर १ हजार १ सय ७४ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, २८ साउन अघिल्लो दिन १६ अंकले ओर्लिएको नेप्से परिसूचक सोमबार भने १० अंकले बढेको छ। १०. ४३ अंकले बढेको नेप्से ११७४ अंकमा कायम भएको छ। परिसूचक बढे पनि कारोबार भने घटेको छ। अघिल्लो दिन २५ करोडको सेयर किनबेच भएकोमा यस दिन १६ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। यस दिन होटलबाहेकका सबै समूह बढेका छन्। सो समूह २.५ अंकले रातो रह्यो। बैंकिङ ७,..
यस साता धितोपत्र बजार र नेप्से दुवै घट्यो : कारोबार रकम अर्ब पनि पुगेन
शनिबार, श्रावन २६, २०७५ साल
काठमाडौँ, २६ साउन धितोपत्र बजारमा यस साता कारोबार रकम र नेप्से परिसूचक दुवै घटेको छ । कारोबार रकम साताभरि नै रु एक अर्ब समेत पुग्न सकेन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १८१ कम्पनीको शेयर कारोबार भए पनि कारोबार रकम भने रु ९१ करोड ८७ लाख ३२ हजारमा मात्रै सीमित भएको छ । यस साता कूल ३६ लाख ४७ हजार आठ सय ४० कित्ता..
सामान्य अंकले घट्यो शेयर बजार, ७ अंकले ओरालो लागेर १ हजार १८० अंकमा कायम !
काठमाडौँ, २४ साउन शेयर बजार बिहिबार पनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ६.६९ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार १८० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत १.३७ बिन्दुले घटेर २४९.१३ बिन्दुमा पुगेको छ । आइतबारदेखि सामान्य अंकमा घट्दै आएको बजार बिहिबार भने करिब सात अंकले ओरालो लागेको हो । स्टकका अनुसार..
शेयर बजार घट्यो : १.४६ अंकले घटेर एक हजार १८८ अंकमा, कारोबार भने बढ्यो
काठमाडौँ, २२ साउन शेयर बजार मंगलबार पनि सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.४६ बिन्दुले घटेर एक हजार १८८ बिन्दुमा झरेको छ । क वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.२६ बिन्दुले घटेको छ । आइतबार बजार १.४३ बिन्दुले घटेर एक हजार १८९.८८ बिन्दुमा पुगेको थियो भने सोमबार पनि सामान्य अंकले गिरावट भएको थियो ।..
शेयरको मूल्य शून्य - उत्पादनमूलक १० कम्पनीको बजार मूल्य जिरो, लगानीकर्ताको लगानी पानीमा !
काठमाडौँ, २२ साउन विगतमा राम्रै आम्दानी गर्ने कूल १० वटा उद्योग तथा कम्पनीका दुई करोड ६४ लाख ३९ हजार ७५६ कित्ता शेयरको मूल्य करीब शून्य हुन पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएपनि ती कम्पनीका शेयर विगत लामो समयदेखि खरीद बिक्री भएको छैन । उनीहरुले स्टकमा हालसम्म सम्पर्क समेत गरेका छैनन् । करीब रु दुई अर्ब ६४ करोड ३९ लाख..
सामान्य अंकले घट्यो शेयर बजार : ०.२१ अंकले घटेर १ हजार १९० अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, २१ साउन शेयर बजारमा सोमबार पनि सामान्य कमी आएको छ । आइतबार सामान्य अंकले घटेको बजार ०.२१ बिन्दुले घटेर एक हजार १८९.६७ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्ससमेत ०.०६ बिन्दुले घटेर २५०.९१ बिन्दुमा झरेको छ । कूल १४८ कम्पनीको सात लाख ९६ हजार ७३४ कित्ता शेयर रु १९ करोड १७ लाख ४८ लाख १२० मूल्यमा..
शेयर बजारमा सामान्य गिरावट, १.४३ अंकले घटेर १ हजार १९० अंकमा पुग्यो
काठमाडौँ, २० साउन शेयर बजारमा आईतबार सामान्य गिरावट भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार आईतबार शेयर बजार १.४३ विन्दुले घटेर एक हजार १८९.८८ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.१८ विन्दुले घटेर २५०.९७ विन्दुले घटेको छ । कूल १६० कम्पनीका पाँच लाख ९७ हजार ५९७ कित्ता शेयर रु १६ करोड ७० लाख ४९ हजार ६८४..
काठमाडौँ, १७ साउन शेयर बजारमा बिहिबार सामान्य गिरावट आएको छ । शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार २.५६ बिन्दुले घटेर एक हजार १ सय ९१.३१ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४१ बिन्दुले घटेर २ सय ५१.१५ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कूल १६२ कम्पनीको छ लाख ७२ हजार ३६८ कित्ता शेयर रु २०..
किन लगातार घट्दैछन् अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका शेयर ? कारण यस्तो छ .....
काठमाडौँ, १५ साउन सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी, घर घरमा बिजुली, जन जनमा शेयरको अवधारणा लागू गरेर सबै नेपाली नागरिकलाई शेयर उपलब्ध गराउने योजना अगाडि बढाएको छ । सबै नागरिकलाई शेयर दिने र जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व महसुस गराउने योजना बनाए पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका १९ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये एकाध कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य रु ५०० भन्दा माथि छ । धेरैजसो कम्पनीको..
सोमबार, श्रावन १४, २०७५ साल
काठमाडौँ, १४ साउन शेयरको मूल्यांकन गर्ने कम्पनी इक्रा नेपालले आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई ‘ग्रेड’ पाँच दिएको छ । सो कम्पनीले यही साउन १७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । गत बिहीबार मात्रै आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीेले साधारण शेयर बिक्रीका लागि सार्वजनिक आह्वानपत्र प्रकाशित गरेको छ । इक्रा नेपालको रेटिङमा पाँचौं नम्बर पाएको सो कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराब..
सामान्य अंकले उक्लियो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ६२ अंकले बढ्यो
काठमाडौँ, १३ साउन साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ३ दशमलव ६२ अंकले बढेको छ। कुल १५३ कम्पनीको १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस दिन बैंकिङ २.९, विकास बैंक ६.७, निर्जीवन बीमा कम्पनी ९.९ जीवन बीमा कम्पनी ५२.६ र अन्य समूह ६.३ अंकले बढे। होटल २०, जलविद्युत ३, फाइनान्स १, उत्पादन ६ र माइक्रोफाइनान्स समूह १ अंकले..
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना : शेयर काठमाडौँबाटै भर्न पाइने, गाउँ गाउँमा स्वयंसेवक जाने
काठमाडौँ, ११ साउन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई आमनागरिकको सहभागिता गराउने लक्ष्यका साथ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको साधारण शेयरमा आवेदन दिन थप सहज बनाइएको छ । गोरखा भूकम्पका कारण दोलखामा बसोबास गर्दै आएका नागरिक काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने क्रम बढेका कारण उनीहरुका लागि आफू बसेको स्थानबाटै शेयरमा आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा..
सामान्य अंकले घट्यो शेयर बजार, नेप्से ३ अंकले घटेर १ हजार १ सय ९१ अंकमा आइपुग्यो !
काठमाडौँ, १० साउन शेयर बजारमा बिहिबार पनि सामान्य गिरावट भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ३.१५ बिन्दुले घटेर एक हजार १९१.२० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै क वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.७५ बिन्दुले घटेर २५०.९६ बिन्दुमा पुगेको छ । कूल १६३ कम्पनीको सात लाख ९२ हजार ५५ कित्ता शेयर रु १९ करोड ३०..
सामान्य अंकले बढ्यो शेयर बजार, नेप्से ४ अंकले बढेर १ हजार १ सय ९९ अंकमा पुग्यो
मंगलवार, श्रावन ८, २०७५ साल
काठमाडौँ, ८ साउन अनलाइन कारोवार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि केही दिन अन्योलमा रहेका लगानीकर्तालाई सामान्य त्राण दिने गरी शेयर बजारमा सुधार आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार मंगलबार शेयर कारोवार मापक परिसूचक नेप्से ४.७७ बिन्दुले बढेर एक हजार १९९.२७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.३६ बिन्दुले बढेर २५२.६८ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकले यही साउन..
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयर बजार, १३ अंकले उकालो लागेर १ हजार १ सय ९४ अंक कायम !
सोमबार, श्रावन ७, २०७५ साल
काठमाडौँ, ७ साउन लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार सोमबार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२.८४ बिन्दुले बढेर एक हजार १९४ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २.४६ बिन्दुले बढेर २५१.३२ बिन्दुमा पुगेको छ । सोमबार कूल १५७ कम्पनीको छ लाख ५८ हजार २९२ कित्ता शेयर रु १८ करोड..
८ अंकले घट्यो शेयर बजार, परिसूचक ओरालो लागेर १ हजार २ सय ४ अंकमा आइपुग्यो
मंगलवार, श्रावन १, २०७५ साल
काठमाडौँ, १ साउन आइतबार र सोमबार उकालो लागेको शेयर बजार मंगलबार आठ अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ८.०५ अंकले घटेर एक हजार २०४ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.५८ विन्दुले घटेर २५३.६२ विन्दुमा आइपुगेको छ । कूल १५२ कम्पनीको पाँच लाख १४ हजार १६१ कित्ता शेयर..
शेयर बजारमा सकारात्मक संकेत, परिसूचक ८ अंकले बढेर १ हजार २ सय अंकमा पुग्यो
आईतवार, आषाढ ३१, २०७५ साल
काठमाडौँ, ३१ असार बीमा, होटल, जलविद्युत् र उत्पादन समूहको शेयर कारोवार उकालो लागेपछि आइतबार शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आइतबार शेयर मापक नेप्से परिसूचक ८.११ बिन्दुले बढेर एक हजार २०० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत १.७६ बिन्दुले उकालो लागेको छ । कूल १७० कम्पनीको छ लाख ६७ हजार ४३४..
लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह : साउन १ गतेदेखि अनलाइन मार्फत शेयर कारोबार हुँदै
शनिबार, आषाढ ३०, २०७५ साल
काठमाडौँ, ३० असार : तपाई शेयर कारोबार गर्नुहुन्छ ? काठमाडौँको धुलो र सवारी चापमा फसेर शेयर दलाल कम्पनीमा पुग्ने गर्नुभएको छ भने अब तपाईको दुःखको दिन सकिएको छ । तपाई अब घर, कार्यालय वा इन्टरनेट भएका जुनसुकै स्थानबाट पनि सहजरुपमा नै कारोबार गर्न सकिने भएको छ । सरकारले आगामी साउन १ गते अर्थात आगामी मंगलबारदेखि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ..
यस साता नेप्से परिसूचक ३२ अंकले ओर्लियो, साताभर १ सय ९१ कम्पनीहरुको २ अर्ब ११ करोडको कारोबार
शुक्रबार, आषाढ २९, २०७५ साल
काठमाडौँ, २९ असार यस साता नेप्से परिसूचक ३२ अंकले ओर्लिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार १ हजार २ सय २४ अंकमा रहेको परिसूचक अन्तिम दिन बिहीबार १ हजार १ सय ९१ अंकमा कायम भएको छ। एक्सचेन्जमा साताभर १ सय ९१ कम्पनीहरुको दुई अर्ब ११ करोडको सेयर कारोबार भयो। कारोबार रकम गत साताको भन्दा ५८.४४ प्रतिशत बढी हो। गत साता एक अर्ब ३३ करोडको..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, १३ अंकले ओरालो लागेर १ हजार १ सय ९१ अंकमा आइपुग्यो
बिहिवार, आषाढ २८, २०७५ साल
काठमाडौँ, २८ असार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजार बढ्ने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्तालाई शेयर बजारले निराश बनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार दोहोरो अंकले घटेको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि शेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । शेयर..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, १८ अंकले ओरालो लागेर १ हजार २ सय ६ बिन्दुमा आइपुग्यो
सोमबार, आषाढ २५, २०७५ साल
काठमाडौँ, २५ असार शेयर बजार सोमबार पनि दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सोमबार नेप्से परिसूचक १८.३३ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार २०६ बिन्दुमा आइपुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ३.८९ बिन्दुले घटेर २५३.८४ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार सोमबार कूल १६७ कम्पनीको १० लाख ६५ हजार ४८६ कित्ता शेयर रु ४०..
सरकारद्वारा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साँउदलाई बर्खास्त
काठमाडौं, असार २४ । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) लाई बर्खास्त गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आईतबार चन्द्र साँउद र बिष्णुबाबु मिश्रलाई पदबाट हटाईको पत्र पठाएको हो । यसअघि गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भदौ १४ गते पछि देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनैतिक नियुक्ति बदर गरेको थियो । सरकारको सोही निर्णयका अधारमा आइतबार..
यो साता ४० अंकले बढ्यो सेयर बजार, एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार !
शुक्रबार, आषाढ २२, २०७५ साल
काठमाडौँ, २२ असार यो साता नेप्से परिसूचक करिब ४० अंकले बढेको छ। बिहीबार एकै दिन ३६ अंकले बजार बढ्दा यो साता बजारमा उल्लेख्य सुधार देखियो। साताको पहिलो दिन आइतबार ११८४ अंकमा रहेको परिसूचक अन्तिम दिन १२२४ अंकमा कायम भएको छ। साताभर स्टक एक्सचेन्जमा १८४ कम्पनीहरुको एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। कारोबार रकम गत साताको भन्दा २८.३९ प्रतिशत बढी हो।..
Results 589: You are at page 15 of 20